Aung Khant Phyo – Spiceworks Myanmar
Author: Aung Khant Phyo
2019-03-14 posted by Aung Khant Phyo
What isaTheme? WordPress theme ဆိုသည်မှာ သက်ဆိုင်ရာ website အတွင်း layout များရဲ့ Design များကို ပြင်ဆင်နိုင်သည့်အရာဖြစ်ပါသည်။ front-end ပိုင်းတွင် သက်ဆိုင်ရာ website
2018-12-21 posted by Aung Khant Phyo
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ ကျွန်တော်ကတော့ မောင်အောင်ခန့်ဖြိုး ဖြစ်ပါတယ်။ Spiceworks Myanmar Company မှာ Web Developer အဖြစ် လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။ ယနေ့ Sass installing နှင့် အသုံးပြုပုံများကို လေ့လာထားသလောက် ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ SASS
2018-09-07 posted by Aung Khant Phyo
2018-07-04 posted by Aung Khant Phyo
2018-06-21 posted by Aung Khant Phyo
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ ကျွန်တော်ကတော့ မောင်အောင်ခန့်ဖြိုး ဖြစ်ပါတယ်။ Spiceworks Myanmar Company မှာ Web Developer အဖြစ် လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။ ယနေ့web development ရဲ့ front end development တွင် အသုံးများနေသာ
2018-04-20 posted by Aung Khant Phyo
Animate Css & Jquery Viewport Checker
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ ကျွန်တော်ကတော့ မောင်အောင်ခန့်ဖြိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ website တော်တော်များများမှာ အသုံးပြုလျက်ရှိသော window scroll up and scroll down ပေါ်မူတည်ပြီး layoutတွေ sectionတွေ div တွေကို Bounce In Up
2017-07-12 posted by Aung Khant Phyo
こんにちは! အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ ကျွန်တော်ကတော့ Spiceworks Myanmar Company မှာ Web designer အဖြစ် လုပ်ကိုင်နေတဲ့ မောင်အောင်ခန့်ဖြိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၅ခုနစ် ၃လပိုင်းမှ စတင်၍ ယခုအချိန်ထိ Spiceworks Myanmar တွင်